Yaraantiisii wuxuu dugsiga Qur’aanka ku soo dhameystay dugsi ku yaalay degmeda Boondheere, sidoo kale wuxuu dugsiga Hoose kaga baxay dugsigii la oran jiray (Madrasat Alnajaax) oo ku yaalay degmada Shangaani, oo ay maamuli jirtay dowlada Masaarida. Dugsiga dhexe wuxuu dhameeyey sannadii 1975-tii, kii sarena sannaddugsiyeedkii 1978/79 wuxxu ku soo dhameystey waxbarashada dugsiga dhexe iyo sareba dugsigii la oran jiray (ALLAHI) ee Jamaal Cabdinaasir, ka dibna waxbarasho taqasus dhinaca maamuka isboortiga (Sport General) ku soo qaatay dalalka Shiinaha, Imaaraadka carabta , Masar iyo dalal kale oo caalamka ka mid ah.
Waxaa kaloo Mr.Abuukar Abanuur Maxamed,uu ahaan jiray dagaalka sokeeye ka hor, nin ganacsade ah, wuxuuna iska lahaan jiray dukaankii duubista iyo kireynta ee la oran jiray HTIM VIEDO CENTER, oo ku yaalay degamada Shingaanii , ayadoo intaa u dheereyd ganacsiga dhoofinta iyo soodejinta. Nasiib wanaag, dhowr iyo toban sano kadib, waxaan ku kulanay Mr.Abuukar Abanuur, Shir sanadeedkii ururka kubadda kolayga SSIFO (Somali Sports & International Friendship Organisation) oo lagu qabtay 11 – 19 August 2008 magaalada London. Waxaana ii suurto gashay in aan wax ka waydiiyo halgankiisii.
6) Bishii Dicember 1978-dii, waxaa loo magacaabay Kaaliyaha Guud ee X.S.K.Miiska. 7) Bishii Maarso 1979-kii, waxaa loo magacaabay Xoghayaha Guud ee X.S.K.Miiska. 8) Bishii Juun 1979-kii, waxaa loo magacaabay madaxa wafdiga xulka Qaranka Kubadda Miiska oo tababar muddo (2) bilood ah u tagay dalka Shiinaha, kuwaasoo loo soo diyaarinayey tartankii 8-aad ee Ardada Dugsiyada Carabta, oo Soomaaliya martigelisay , laguna qabtay magalaada muqdisho, waxaa kaloo muddadaasi aan dalka Shiinaha ku soo qaatay waxbarasho gaaban ee maamulka dhinaca isboortiga guud (general sport)